Madaxweyne Saciid Deni oo soo jeediyay dhaqaale in lagula dagaallamo Ururka Al-Shabaab | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweyne Saciid Deni oo soo jeediyay dhaqaale in lagula dagaallamo Ururka Al-Shabaab
Madaxweyne Saciid Deni oo soo jeediyay dhaqaale in lagula dagaallamo Ururka Al-Shabaab
Nairobi (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Mudane Siciid Cabdulaahi Dani ayaa ka hadlay dagaalka lagula jiro Ururka Al-Shabaab ee inta badan ka dagaallama Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Mr. Dani, ayaa sheegay Al-Shabaab inay caqabad ku yihiin deganaanshaha geeska Afrika, islamarkaana loo baahan yahay in si wadajir ah loola dagaalamo.
Madaxweynaha Puntland ayaa soo jeediyay qaab dhaqaale in lagula dagaalamo Al-Shabaab, maadaama sanado badan dagaalka Militariga wax looga qaadi waayay.
“La dagaalanka fikirka Xagjirka ah iyo nabadgelyadooda ma ahan daawadooda in lala dagaalamo Militari ahana, waa in si kobac dhaqaale lagula diriro oo dadka inta la qaldayo laga gooyo”, ayuu yiri Saciid Dani oo ka hadlaayay Magaalada Nairobi.
Dagaalka Ururka Al-Shabaab lagula jiro waxaa iska kaashaday dowlado kala duwan oo Reer Galbeed iyo Afrikaan isugu jira.
Ururka Al-Shabaab ayaa awoodooda waxa ay ku tiirsan tahay inuu sareeyo Sirdoonkooda, islamarkaana xogo badan ay ka dhex helaan Hay‘addaha dowladda.
Madaxweynaha Puntland Saciid Deni
soo jeediyay dhaqaale in lagula dagaallamo Al-Shabaab